Kala Orod Maanta ka Dhacay Garoonka Diyaaradaha Orly ee Dalka Faransiiska (VIDEO) - Hablaha Media Network
HMN:- Waxaa saakay abaarihii 8:30 subaxnimo, garoonka diyaaradaha ORLY oo ku yaalla magaalada Paris ee dalka Faransiiska lagu dhex toogtay nin aan la’ogayn cida uu yahay, ninka la toogtay ayaa la sheegayaa inuu mid kamid ah askarta ammaanka sugta ka dafay bistoolad kaddibna ku dhex carary suuq ku yaala garoonka gudihiisa.
Booliska la dirira argaggixisada ayaa baadigoob ka bilaabay garoonka oo laga yaabo in qofka dhintay uu meel kamid ah garoonka uga tagay wax qarxi kara, waxaana loo digay dadka inay isaga baxaan gudaha garoonka.
Garoonka Orly oo ah midka labaad ee ku yaala caasimadda dalka Faransiiska ayaa muuqaalo laga soo duubay waxaa laga dareemayaa argaggax ka muuqda dadkii ku sugan garoonka intay socotay daad-guraynta.
Duulimaadyadii soo caga-dhigtay garoonka ayaa lagu hakiyay barxadda garoonka iyo dadkii saarnaa, waxaana laga codsaday inay ku sugnaadaan diyaaradda inta baaristu ka dhammaanayso.
TV laga leeyahay dalka Faransiiska ayaa shaaciyay inuu nin isku dayay inuu askari ka dafo bastoolada kaddibna askari kale uu rasaas ku furay ninkii soo weeraray, sidaasina uu ku geeriyooday.